बाख्रा हेर्न गएकी ११ बर्षीया बालिका बलात्कृत, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बाख्रा हेर्न गएकी ११ बर्षीया बालिका बलात्कृत
लमजुङ । लमजुङमा सुस्त मनस्थितिकी एक बालिका बलात्कारमा परेकी छन् ।
११ बर्षीया बालिकालाई बनेपा धुलिखेल स्थायी घर भई हाल राइनास नगरपालिका ६ बस्ने ५६ बर्षीय ज्ञानबहादुर लामाले जबरजस्ती करणी गरेको लमजुङ प्रहरी प्रमुख डीएसपी पदमबहादुर विष्टले बताए । बुवासँग बाख्रा हेर्न गएकी बालिकालाई मदिरा सेवन गरेका लामाले मंगलबार दिउँसो करिब १ बजे करणी गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
३० बर्षलेदि राइनासमा मजदुरी गर्दै आएका लामालाई साँझ साढे ५ बजे पक्राउ गरिएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर प्रकाशित छ ।